Shir ku Saabsan Qaybinta Deeqda Raashin ka timid Turkiga oo ka dhacay Muqdisho[Sawirro] | SAHAN ONLINE
Shir ku Saabsan Qaybinta Deeqda Raashin ka timid Turkiga oo ka dhacay Muqdisho[Sawirro]
MUQDISHO – Waxaa maanta shir isugu yimid magaalada Muqdisho Guddiga Gargaarga ee xaaladda abaarta Soomaaliya,waxaana shirkaas looga hadlay mucaawino raashin ah oo dalka loogu deeqay sidii loo gaarsiin lahaa dadka ay baahidu hayso.
Shirkaan ayaa waxaa ka qeybgalay Wasaaradda Gargaarga iyo Maareynta Musiibooyinka.
Ra’iisul Wasaare Xigeenka XFS Mudane Mahdi Maxamed Gulled (Khadar) ayaa ka mid ahaa masuuliyiintii ka qaybgalay shirka guddiga abaaraha, waxana kulankani looga hadlayay sidii dadka Soomaaliyeed loo gaarsiin lahaa deeq mucaawino ah oo wadamada Turkiga iyo Indonesia ay soo gaarsiiyeen walaalahooda Soomaaliyeed ee sameeyeen abaarihii dalka ka dhacay.
Kulanka kadib, ayaa waxaa saxaafadda la hadlay Wasiir ku xigeenka Wasaaradda Gargaarka iyo Musiibooyinka Xildhibaan Cilmi Cumar Caynsane ayaa sheegay in gar-gaarkani uu yahay mid loogu talagalay in lagu caawiyo shacabka Soomaaliyeed, isla markaana ay dawladdu ka shaqeynayso sidii gar-gaarku u gaari lahaa dadkae u baahan. isagoo xusay in kulanka ay goob-joog ahaayeen Guddigga gurmadka abaaraha oo qorshuhu yahay in gurmadkani ay gaarsiiyaan shacabka u baahan.
Qaar kamid ah gobolada daka waxaa weli ka taagan Abaar daba dheeraatey.